वेब डिजाइन: यो तपाईंको बारेमा होइन Martech Zone
बिहीबार, जुलाई 23, 2009 सोमवार, जुन 2, 2014 जोन अर्नोल्ड
के तपाईं ठूलो वेबसाइट पुन: डिजाइनमा लिन लाग्नु भएको छ? कसरी कि clunky तर महत्वपूर्ण सफ्टवेयर अनुप्रयोग को पुनर्निर्माण को बारे मा? तपाईंले डुब्नु भन्दा पहिले यो याद गर्नुहोस् कि गुणस्तरको अन्तिम आर्बिटर तपाईं होइन, यो तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू हो। यहाँ केहि चरणहरू छन् तिनीहरूको आवश्यकताहरू र व्यवहारलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईंले कुनै बहुमूल्य प्रोग्रामिंग डलर खर्च गर्नु अघि:
तपाईको प्रयोगकर्ता अनुसन्धान गर्नुहोस्
कुनै परिमाणात्मक डेटाको साथ सुरू गर्नुहोस्, जस्तै विश्लेषण, कि तपाईंले पहिल्यै देख्नु भएको छ कि तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू के गर्दैछन् (वा नगर्दै छन्)। थप अन्तर्दृष्टि को लागी, तपाइँ प्रयोगकर्ता-परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ वर्तमान साइट वा सफ्टवेयर पहिले देख्नका लागि के खुशी हुन्छ र कुन कुराले तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई निराश तुल्याउँछ। हालको र स्थिर प्रयोगकर्ता मुद्दाहरू सिक्न बिक्री वा ग्राहक सेवामा सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। यदि यो अनुसन्धान डेटा कहीँ कही रिपोर्टमा पहिले नै अवस्थित छ भने, कुरा गर्नको लागि समय बनाउनुहोस्। समानुभूति मानिसहरूसँग वास्तविक कुराकानीबाट उत्पन्न गरियो खाडलहरूमा प्राकृतिक रूपमा अधिक प्रयोगकर्ता केन्द्रित डिजाइन र विकास निर्णय लिन तपाईंलाई सुसज्जित गर्दछ।
एक प्रोटोटाइप बनाउनुहोस्
वास्तवमा, त्यो बनाउनुहोस् प्रोटोटाइप (बहुवचन)? कसैले पनि पहिलो प्रयासमा उत्तम प्रोटोटाइप सिर्जना गर्दैन। तर त्यो विचार हो: जति सक्दो चाँडो, सस्तोमा असफल हुन, र जतिसक्दो सम्भव छ भन्ने थाहा पाउँदा प्रत्येक पुनरावृत्तिले तपाईंलाई निर्माणको लायक समाधानको नजीक ल्याउँछ। निश्चित रूपमा तपाई HTML वा फ्ल्यासको साथ प्रभावी प्रोटोटाइपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, तर एक्रोब्याट, पावरपोइन्ट, र कागज र पेन्सिल अझै पनि उत्कृष्ट उपकरणहरू हुन् तपाईंको विचारहरूलाई मूर्त ढाँचामा ल्याउन। त्यसो गर्दा, तपाईं राम्रो कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, मूल्या ,्कन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको विचारहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षणको कुरा गर्दैछ?
जब केहि प्रयोगकर्ताले परीक्षणको बारेमा सोच्दछन्, तिनीहरू सेतो प्रयोगशाला कोट र क्लिपबोर्डहरू कल्पना गर्छन्। दुर्भाग्यवस, धेरैले ढिलाइ र थप खर्चको कल्पना पनि गर्छन्। जब यो बीचमा छनौट गर्न बाध्य हुन्छ र कुनै पनि प्रयोगकर्ता परीक्षण मा सबै, पछि सबैभन्दा छनौट। लाजको लागि! साना प्रोजेक्टहरूमा वा ती दुष्ट-टाइट डेडलाइनका साथ, छापाला दृष्टिकोण लिनुहोस्: to देखि १० सहकर्मीहरू, अभिभावक, जीवनसाथी, छिमेकीहरू (जो कोही मद्दत गर्न इच्छुक छन्) फेला पार्नुहोस् र उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा एक वा दुई सबै अति महत्वपूर्ण कामहरू अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईंको प्रोटोटाइपमा। यसले तपाइँलाई सबै अन्तरदृष्टि वा फैन्सी रिपोर्टहरू दिदैन जुन औपचारिक प्रयोज्य परीक्षण प्रदान गर्दछ, तर केवल एक व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्दा कसैलाई पनि परीक्षण गर्नु भन्दा १००% राम्रो हुन्छ। परिणामले तपाईंलाई अचम्मित गर्न वा निराश गर्न सक्छ, तर यी चीजहरू अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि यस प्रोजेक्टमा काम नगरी राम्रो हो।
यो सत्य हो कि हामी मानिस चम्किलो, राम्रा चीजहरू मन पराउँछौं। टेक्नोलोजीमा, राम्ररी डिजाइन गरिएको इन्टरफेस गैर-डिजाइनहरू भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो मानिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको परियोजना सौन्दर्य प्रतियोगिता हुनुपर्दछ, तथापि। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि यदि गुगलको स्क्रिन डिजाईनले रिच इमेजरी र विस्तृत स्क्रीन ट्रान्जिसनहरू प्रयोग गरे। जबकि यो अर्को सेटिंग मा अपील गरिएको हुन सक्छ, यो एक खोज पर्दामा एक पूर्ण उपद्रव हुनेछ। गुगलका लागि, र वास्तवमै धेरै अन्य, सबै भन्दा बढि सुन्दर स्क्रीन डिजाइन अक्सर सरल हुन्छ।
यो लायक छ
चाँडै नै नयाँ प्रोजेक्टमा दिइएका प्रेसहरू हामी राम्रोसँग जान्दछौं काममा लाग्नुहोस् केहि निर्माण गर्दै। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ जब प्रयोगकर्ता अनुसन्धान, प्रोटोटाइप, र प्रयोगकर्ता परीक्षण जस्ता कदमहरू पहिलो चीज हुन् जब बजेट र टाइमलाइन कडा हुन्छन्। विडम्बना यो हो कि यी प्राय: हुनेछन् सुरक्षित लामो समय मा समय र पैसा, र अन्ततः अनजानमा के काम गर्दैन के मात्र एक राम्रो देखिने संस्करण को पुनर्निर्माण बाट तपाइँलाई रोक्नुहोस्।
टैग: डिजाइनप्रयोगकर्ता अनुभवप्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइनuxवेब डिजाइन
जोन अर्नोल्ड ट्युटिभका संस्थापक र अध्यक्ष हुन्, प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन कम्पनी जसले वेब र मोबाइल अनुप्रयोगहरूलाई बढी उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाउँछ (र पनि राम्रो देखिन्छ!)
WordPress: साइडबारमा लेखक जानकारी थप्नुहोस्
जुलाई १,, २०१ at १::23२ अपराह्न
डग्गी होइन! यो पोष्ट ट्युटिभबाट हाम्रो मित्र जोन अर्नोल्ड द्वारा लेखिएको थियो - शहरको एक शानदार एजेन्सी जसले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अधिकतम गर्ने अतुलनीय वेब डिजाइनहरू निर्माण गर्नमा माहिर छ।
वास्तवमै प्लगइनमा बदल्नको लागि धेरै गाह्रो हुनु हुँदैन।
यसमा पहिले नै काम गर्दैछ, डेभ! :) मेरो Verizon वायरलेस ब्ल्याकबेरीबाट पठाईएको हो
बाट: IntenseDebate सूचनाहरू